Lelee na ọnọdụ nke ụtụ isi gị na Canada
Lelee na ụtụ isi gị na-akwụghachi na Canada
Lelee Ụdị Ụgwọ Akwụghachi Income nke Canada
Ụlọ ọrụ Canada Revenue Agency (CRA) adịghị amalite nhazi akwụkwọ ụtụ isi ego nke Canada na-akwụghachi ruo mgbe etiti February. N'agbanyeghi oge ị batara ụtụ isi ụtụ isi gị, ị gaghị enwe ike ịnweta ozi gbasara ọkwa ego ụtụ isi ruo n'etiti March. I kwesịkwara ichere ruo mgbe ọ dịkarịa ala izu anọ ka ị deghachitere nloghachi gị tupu ị nyochaa ọnọdụ nke nkwụghachi ego ụtụ isi.
Ọ bụrụ na ịdee nlọghachi gị mgbe April 15 gasịrị, chere izu isii tupu ị chọpụta ọnọdụ nke nloghachi gị.
Oge nhazi maka nkwụghachi ego
Ogologo oge ọ na-ewe CRA iji dozie ụtụ isi ego gị na nkwụghachi na-adabere n'otú na mgbe ị na-edeghachi nlọghachi gị.
Oge nhazi maka akwụkwọ na-alaghachi
Akwụkwọ na-ewekarị izu anọ na isii ka hazie.
Maka akwụkwọ ụtụ isi akwụkwọ na-ede akwụkwọ tupu April 15 , chere izu anọ tupu ị chọpụta nkwụghachi gị.
Maka akwụkwọ ụtụ isi akwụkwọ na-ede akwụkwọ mgbe April 15 , chere izu isii tupu ị chọpụta.
Oge nhazi maka Nlọghachi Electronic
Igwe Electronic ( NETFILE ma ọ bụ EFILE ) nwere ike iwepụta ihe dị ka ụbọchị ahia asatọ. Otú ọ dị, ị ga-echere ma ọ dịkarịa ala izu anọ tupu ị chọpụta nkwụghachi gị.
Nhọrọ Ụtụ Họrọ maka Nyochaa
A na-ahọrọ ụtụ isi ụtụ isi, ma akwụkwọ ma kọmputa, ka CRA jiri nlezianya tụleeghachi nkwụghachi azụ nke ụtụ isi tupu a chọpụta ha, nakwa yana e mesịrị.
CRA nwere ike ịjụ gị ka ị nyefee akwụkwọ iji nyochaa nkwupụta ị kwuru. Nke a abụghị nyocha ụtụ isi, kama ọ bụ akụkụ nke mgbalị CRA iji chọpụta ma dokwuo anya ebe ndị nghọtahie dị na ụtụ isi nke Canada. Ọ bụrụ na ịhọrọ nkwụghachi ụtụ maka nyochaa, ọ ga-ewelata nyocha ahụ na nkwụghachi ọ bụla.
Ozi achọrọ iji lelee nkwụghachi ego gị
Iji chọpụta ọnọdụ nke ụtụ isi ụtụ isi gị na-akwụ, ị ga-enye ozi ndị a:
Nọmba Nkwekọrịta Social Gị
Ọnwa na afọ nke ọmụmụ gị
Ọ bụrụ na ị na-akpọ tupu May 1, 2015, ị ga-achọ ego ịbanye dị ka Onyinye Nkwụnye na akara 150 nke ụtụ isi ego gị ga-akwụ ụgwọ maka afọ 2013. Ọ bụrụ na ị na-akpọ mgbe May 1, 2015, ị ga-achọ ego ruru dị ka Total Income on line 150 of your nkwụghachi azụ maka afọ 2014. (Ọ dịkwa mma ịnweta aka.)
Lelee na ntanetị ego gị na-akwụ ụgwọ
Ị nwere ike ịlele ọnọdụ nke nkwụghachi ụgwọ ụtụ isi gị site na iji ọrụ ụtụ isi Akaụntụ M.
N'afọ 2015, ọrụ Nweta Ndenye anaghịzi enweta site na CRA. Otú ọ dị, ị nwere ike ịnweta ohere ụfọdụ nke ụtụ isi gị, gụnyere ọnọdụ nke nkwụghachi ego gị na nkwụghachi, site na ịdenye Akaụntụ M, ma ọ bụ site na iji ozi ntanetị nwere online ma ọ bụ ịmepụta ID na ọrụ paswọọdụ CRA. Ị ga-ezipụ otu koodu nche n'ime ụbọchị 5 ruo 10, mana ịkwesighi ya iji nweta ụfọdụ nhọrọ ọrụ. (The koodu nchekwa nwere oge mmebi, ya mere ọ bụ ezi echiche iji ya mgbe ọ bịarutere, yabụ na ị gaghị agabiga usoro ọzọ mgbe ịchọrọ iji Akaụntụ M maka ọrụ ọzọ.)
Ị ga-enye ya
Ụbọchị ọmụmụ gị
Gị koodu nzipu ozi gị ma ọ bụ koodu ZIP dika o kwesiri
Ego ole ị banyere na ụtụ isi ụtụ isi gị ma ọ bụ afọ ụtụ isi a dị ugbu a ma ọ bụ nke mbụ. Nwere ma abuo.
Lelee na nkwụghachi ụtụ isi gị site na Ọrụ Nchekwa Akpaaka
Ịnwere ike iji ọrụ ekwentị Telerefund rụọ ọrụ na Akaụntụ Ozi Ozi Ụtụ (TIPS) iji chọpụta ma ọ bụrụ na ịghaghachị nlọghachi gị na mgbe ị ga-atụ anya nlele ego nkwụghachi gị.
TIPS nọmba ekwentị bụ: 1-800-267-6999
Ọrụ Telerefund dịkwa na: 1-800-959-1956
Kedu Ka Mmalite Aha ahụ 'Ontario'?
Stonehenge: Nchịkọta nke Nchọpụta Ihe Archeeological na Megalithic Ncheta
Ndị na-ede akwụkwọ: Afọ Ọhụrụ
Ndị isi mmeri 5 nke nnukwu Slam n'Ọkụ Ụmụnna
Kedu akwụkwọ edemede nke mkpụrụ akwụkwọ ahụ?
Mee ka kandụl na-anwụrụ ọkụ - njem ọkụ ọkụ na-eme njem
Oghere Egwuregwu Gburugburu
Esemokwu na akwụkwọ
Otu esi eme ka mgbanaka ọkụ ọkụ
Ọ na-enyere gị aka na-eme ka gị na onye ọ bụla na-eme ihe?
Biko, 'Kwuo' m
Atụmatụ maka ịrịọ mkpebi mkpebi nchịkwa nke ụlọ akwụkwọ
Mmadụ iri anọ na-ewepụ onwe ha na Mai Bhago
Ụlọ akwụkwọ Cheyney nke Pennsylvania Admissions
Ihe Nlereanya nke Nkọwa Ama
William McKinley Eziokwu Eziokwu
Ụgha nke Yesja
Ihe ndekọ banyere Marilyn Monroe
The Top 10 Deadliest US US
Amụma American: Major General William Alexander, Lord Stirling
Na-esite na Green, Ị Na-enweta Enyemaka Site na Onye Na-agba Ọkụ?